Global Voices teny Malagasy » Malezia: mitaky fitovian-jo ny Maleziana karana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Novambra 2007 9:05 GMT 1	 · Mpanoratra Angilee Shah Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Malezia, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Politika
Noho ny fiparitahan’ny tangoron’olona moa dia sarotra ny naminavina ny isan’ny mpanao fihetsikatsehana nanatrika teo hany ka samy manana ny fanombanany azy ny mpitati-baovao. Ny BBC, izay nitantara hatreo ivelan’ny lapan’ny Vaomiera Ambony Britanika  , nilaza fa mihoatra ny 5,000 ireo nifamotoana ireo. Ny Associated Press (via The Telegraph any India) kosa milaza ny isa ho mihoatra ny 10,000 . Asia Times indray maminavina fa mihoatra ny 20,000 ireo nifamotoana, fa ny mpamoaka vaovao an’aterineto Malaysiakini indray no milaza fa 30,000 ny isan’ny tafavory .
Saingy namaly kosa ny mpanao fihetsiketsehana fa nihaona ry zareo hanaitra ny Malaysian Indian Congress, izay manana an’Atoa YB. Dato Seri S. Samy Vellu  ho filohany hatramin’ny filohan’ny antoko hatramin’ny taona 1979. Maro ireo mpanao fihetsiketsehana no naneho ny fahadisoam-panantenany manoloana ny fatoritorian’ny antoko mba hampakarana ny toerana misy ny karana ao Malaysia.
Ny mpamahana ny bolongana Colour Blind dia i Ronnie Liu moa nitantara fa mitaky ny hialan’Atoa Samy Vellu  (anarana koa re izany ! tahaka ny hoe gasy !) ny mpanao fihetsiketsehana.
Disquiet [tsy mangina] mpamahambolongana sy filohan’ny National Human Rights Society na Fikambanam-pirenena miaro ny zon’olombelona , mampitaha ny asetrin’ny polisy amin’izao fotoana izao ny HINDRAF tamin’ny nataon’ny polisy ihany tamin’ny fihetsiketseham-panoheran’ny tanora UMNO  i Malik Imtiaz Sarwar.
Raha mifantoka amin’ny fomban’ny polisy hanaparitahana ny fivorivorian’ andian’olona ny mpamaham-bolongana amin’ny teny anglisy sy ny haino aman-jery iraisam-pirenena, ka ao anatin’izany ny AlJazeera  sy ny BBC , ny gazety Maleziana tahaka ny The Star  sy The New Straits Times  kosa mampivoitra ny ratran’ny polisy noho ny fihetsiketsehana mahery setran’ny mpitokona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2007/11/29/270/
 Flickr ampiasain'i lastham: http://www.flickr.com/photos/lastsham/2065047564/
 hatreo ivelan’ny lapan’ny Vaomiera Ambony Britanika: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7111646.stm
 milaza ny isa ho mihoatra ny 10,000: http://www.telegraphindia.com/1071126/asp/foreign/story_8592442.asp
 30,000 ny isan’ny tafavory: http://atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IK27Ae04.html
 Samy Vellu: http://en.wikipedia.org/wiki/Samy_Vellu
 mitaky ny hialan’Atoa Samy Vellu: http://colour-blind.org/wordpress/?p=275
 fihetsiketseham-panoheran’ny tanora UMNO: http://malikimtiaz.blogspot.com/2007/11/personal-dignity-of-hindraf-supporters.html
 The Star: http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2007/11/26/nation/19575975&sec=nation